Global Voices teny Malagasy » Toetran-dahy ao anatin’ny fototarazoko sy ny jeans-ko · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Oktobra 2020 15:24 GMT 1	 · Mpanoratra Amilcar Sanatan Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Karaiba, Trinite sy Tobago, Fahasalamàna, Fampandrosoana, Fanabeazana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tanora, Tantara, Vehivavy sy Miralenta, Zavakanto & Kolontsaina, Ny Tetezana - The Bridge
Jeans sary an'i  Jason Leung  tao amin'ny Unsplash .
Nivoaka voalohany  tao amin'ny Promundo, ity lahatsoratra ity, momba ny “/masc: resadresaka momba ny toetran-dahy ao anatin'ny vaninandro maoderina.” Nahazoana alàlana ny dika nokiraina sy navoaka eto ambany.
Zavatra iray mampihomehy ny teny. Ny fampianarana manara-drafitra dia mampianatra antsika hifehy ny anglisy fampiasa andavanandro. Any anatin'ny kilasy fianarana literatiora sy fiteny anglisy, amin'ny alàlan'ny fanitsiana sy ny fitanisàna andalan-tononkalo, amporisihana isika ho lasa “lehilahin'ny saranga antonony, nahita fianarana ary afaka tamin'ny fanandevozana”. Saingy ireo tovolahy izay mahay ny fitenim-pireneny kosa (“Kreola” ) dia tsy misy fotoana ho atokana ho an'izay tsy mampiasa afa-tsy fiteny anglisy fampiasa andavanandro; takian'izy ireo ny tsirairay mba hijoro ho “tena lehilahy avy amin'ity kolontsaina sy ity tany ity”.
Nisy vono olona nihoatra ny 500 tao Trinidad&Tobago tato anatin'ny taona roa farany. Mazava ho azy, tsy misy mihitsy fanjakàna haniry ny hisiana olana ateraky ny heloka bevava  ao aminin'ny taniny, saingy ny valinkafatra avy amin'ny fanjakàna dia ny manipy foana ny andraikitra  ho any amin'ny vahoaka ho tsy ampy fanajàna ny maoraly ary ny kolontsain'ny fitaizàna  tsy miraharaha ataon'ny ray aman-dreny izay heverina ho toy ny taninketsa niteraka ny famarotana an-tsokosoko  zavamahadomelina sy basy nanerana ny firenena, nitarika ihany koa ny fanaovana kolikoly eny anivon'ny orinasa rehefa hanao fifanarahana asa , nitondra ho amin'ny fiforonana andian-jiolahy  eny anivon'ny fiarahamonina sahirana any an-tanandehibe, ary ny fitomboan'ny “vondrom-piarahamonina manidy vavahady” mba hametrahany tsipika mametra ny elanelana ara-tsôsialy eo amin'ireo saranga, ny fisiana ara-tsôsialy ary ny fahafaha-manao zavatra. Taratry ny tsy fetezan'ny fihodin'ny pôlitika ary ny tsy fahampian'ny fahafahan'ny fanjakàna mametraka fitoniana ho an'ny vahoaka, amin'ny ankapobeny dia toa mandeha tsy misy mpahita ny vono olona , ny fanolanana , ny herisetran'ny pôlisy  ary ny habibiana ao anaty fiarahamonina, no sady tsy misy bedy. Ny tsara indrindra azontsika atao sisa, amin'ny maha-vahoaka, dia ny mahatsiaro ireo havantsika nodimandry mba hamerenana amin'ny laoniny ny lanjan'ny aina maha-olombelona, ary mampihanjahanja ny asa tsy vitan'ny fanjakàna.
Ireo lehilahy fadiranovana izay nandatsaka aina ny olona niarahany  koa dia betsaka loatra tsy hita ho tanisaina intsony. Tamin'ny tranga iray  tamin'ny Janoary lasa teo, rehefa niezaka ny hanavotra ny ainy hiala tamina fiarahana iray mampididoza ny vehivavy iray, nandehanan'ilay rangahy niarahany taloha tany amin'ny toerana fiasàny, rehefa avy nilàny vaniny am-bolana maro tety anaty tambajotra ilay ramatoa, ary dia notifiriny in-droa. Namono tena rangahy io avy eo. Nanodidina ny tamin'ny 8:00 maraina tamin'izay, fotoana fandraisan'ny sasany amintsikja ny kafe iray kaopiny, ny sasany kosa efa eny an-dàlana handeha hamonjy ny asany, ary ny ankizivavy sasany mpianatra indray dia mitily ny endrik'ireo lehilahy eny amin'ny toerana fandraisana taxi, alohan'ny handraisana fanapahankevitra hoe taxi itsy na iroa no horaisina: “Iza no tsy mampahatahotra indrindra?” “Efa nisy nahitako azy io tany aloha” “Tsy hoe satria efa antitra izy dia tsy ho lasa mpanolana ahy.” Manodidina ny tamin'ny 8:00 maraina, mamily fiara aho mamonjy sekoly. Mampaneno anjomara in-dray mandeha aho rehefa mahita vehivavy tsara tarehy, in-droa raha tena mampivanàka ahy izy, no sady hitako ho manaitaitra filàna (“bess”) ka tsapako ho misy filàna izany ato amiko hanototra ny ampongan-tsofiny sy ny fahatoniany amin'ny feon'ny filàm-baniiny. Raha tsy hitanao ny antony mahatonga ireny fomba fanao andavanandro ireny ho tonga any amin'ny fahafatesana vehivavy, dia efa safidy ny anao ny tsy hiraharaha ny zavatra fonosina sy afenin'ny atao hoe “maha-lehilahy”.
Io no antony mahatonga ny fanontaniana hoe “Aiza ireo lehilahy?” apetrak'ireo vehivavy rehefa manao diabe  mitaky ny zony mba ho ekena sy ho arovan'ny fanjakàna ary ireo olontsotra mpikambana ao anatin'ny fiarahamonina. Mba hahafahana mino marina ilay hiaka fitakiana fanonerana, tena vitsy loatra ho anay ireo mpanao diabe, ny fanehoana firaisankina avy amin'ny daholobe, ary ireo namana : “Tsy ny lehilahy rehetra dia ratsy avokoa.” Misy ireo lehilahy sasany mitondra ny fiainany manaraka ny “làla-marina”— manolotra fitiavana mampitolagaga ho an'ireo zanany vavy ary « eo mandrakariva» ho an'ny ankohonany. Eny, tsy ny lehilahy rehetra dia ratsy avokoa, saingy marobe no mikombom-bava, ary vitsy kely ireo azo ianteherana amin'ny tolona hisian'ny fitovian'ny lahy sy ny vavy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/10/14/149910/
 Nivoaka voalohany: https://medium.com/masc-conversations-on-modern-masculinity
 olana ateraky ny heloka bevava: https://globalvoices.org/2014/05/21/video-on-murder-and-corruption-in-trinidad-goes-viral/
 manipy foana ny andraikitra: https://globalvoices.org/2017/02/07/trinidad-tobagos-prime-minister-says-women-should-choose-their-men-more-wisely-to-avoid-violence/
 famarotana an-tsokosoko: https://globalvoices.org/2014/01/22/major-us-drug-bust-forces-trinidad-tobago-to-confront-parallel-economy/
 fifanarahana asa: https://globalvoices.org/2015/12/23/on-politics-big-contracts-and-parties-in-trinidad-tobago/
 vono olona: https://globalvoices.org/2019/07/15/a-prolific-theatre-producer-is-one-of-the-latest-victims-in-trinidad-and-tobagos-crime-spiral/
 herisetran'ny pôlisy: https://globalvoices.org/2020/06/30/police-killings-spark-protests-in-trinidads-capital/
 nandatsaka aina ny olona niarahany: https://globalvoices.org/2020/04/10/stay-at-home-orders-accompanied-by-rise-in-domestic-violence-in-trinidad-tobago/
 tranga iray: https://globalvoices.org/2020/01/31/remembrance-for-femicide-victims-trinidad-tobago-raises-awareness-gender-based-violence/